Hiriira deeggarsaa MM Dr Abiyiif Waxabajji 16 bahame irratti namoota yaalii ajjeechaan shakkamaniif });
Hiriira deeggarsaa MM Dr Abiyiif Waxabajji 16 bahame irratti namoota yaalii ajjeechaan shakkamaniif
Mana murtii Federaalaa damee Lidataatti dhaddachi yakkaa 19ffaa namoota yakka haleellaa boombii waxabajjii 16'n himataman irratti himata erga dubbisee booda beellama qabateera.
Manni murtichaa ragaa ittisaa shakkamtoota kunneenii dhagahuuf onkololeessa 16 2011 beellama qabateera.
Himatni dhadachaan dubbifames namootni himannaan irratti dhiyaate 5 hiriirri deeggarsaa taasifamuu hin qabu, MM Abiy Ahimad uummata Oromoo biratti fudhatama hin qaban, mootummaan isaanis jiraachuu hin qabu kan jedhu dha.
Akkasumas mootummaan Abiy Ahimad HR 128 hojiirra akka hin oolle kan taasisuudha jechuun akkasumas MM irratti haleella qaqqabsiisuf karoorfatanii yakkicha raawwatan jedha.Kana malees manni murtichaa himata hundaa'eef abbaan alangaa ragaa namootaa 140 fi ragaalee sanadaa 17 akka qabus dubbiseera.Himatni dhiyaate himatamaan tokkoffaa Geetuu Girmaa Keeniyaatti kan argamtu Gannat/Tolashii Taamiraat walin bilbilaan mari'achuun yakkicha qindeessera jedha.
Himatamaan lammaffaa Birhaanuu Jufaar immoo himatamaa tokkoffaa Geetuu Girmaatti gosa boombii F1 jedhamu fi ጪስ ቦምብ akka qabu himun nama haleellaa raawwatu barbaaduuf magaala Sulultaatti mari'ataniiru jedha.Kana malees himatamaan sadaffaa Xilaahun Getaachoo, himatamaa afraffaa Bahaaruu Tolaa fi himatamaan shanaffaa Dassaalany Tasfaayee dhoohinsa boombii waxabajjii 16 raawwachuu keessatti waahillan isaanii biroo waliin qooda fudhachuu isaanii himata dhiyaaten himameera.Himatamtoota shananiif abukaatoo kan ta'an Obbo Wandimmuu Ibsaa guyyaa boombichi dhoohutti himatamtoota keessaa nama tokko qofatu iddichatti ture jechuun BBCti himan. Himannaan kunis himannaa shororkeessummaa waggoota darbanitti namoota irratti hundaa'aa turen adda kan ta'e miti jedhan.
Himatamaan tokkoffaa Geetuu Girmaa kanaan dura shororkeessummaan himatamee waggaa lamaa ol hidhamee erga bahee booda ji'a sadi booda irra deebin qabamuusaa abukaatoo Obbo Wandimmuu Ibsaa himaniiru.
Geetuu Girmaa kanaan dura galmee Obbo Baqqalaa Garbaafaa jalatti shorokeessummaan himatamee hidhaa turuun dhiifama bulchiinsi Dr Abiy taasiseen mana hidhaatii kan bahe tahuu kan himan abokaatoon kun dhimma ittiin Dr Abiy irratti kana yaadu akka hin qabne natti himeera jedhan.
Dabalataan dubartii Keeniyaa irraa dhohinsicha qindeesite jedhamte Gannat[Tolashee ] waliin dur mana barumsaatti Geetuu Girmaa akka wal beekuu fi waggota 10 as akka tasumaa wal quba hin qabne natti himeera jedhan Obbo Wandimuun.
Kan inni qabame illee hiriyyoota isaa gaafachuu hospitaala Abeetuu deemee akka tahe himaniiru.
Biraanuu Jifaar illee guyyaa sana akka achi hin turre himuun foon waan daldaluuf Sulultaa deemee foon fe'ee osoo deemaa jiruu akka qabame dubbatan.
Himatamaan biraa Xilahun Geetachoo kan jedhamu yoo tahu duras abbaan isaa Obbo Geetaachoo Gonfaa shororkeesuummaan himatanii mana hidhaa akka turan himaniiru.
Kanaafuu Xilahun yeroo abbaansaa shororkeessummaan himatamu aariidhaan bulchiinsa duraan taayitaa irra turee fi abbaasa hidhe irratti qabsaa'uuf bosonatti galee akka qabsoorra ture himaniiru.
Booda mootummaatti harka kennatee ture. Erga Dr Abiy taayitaa qabatanii, abbaan Xilahun Obbo Geetaachoon mana hidhaatii bahan.
Abbaan isaa mana hidhaatii bahuunis gammachuu guddaa waan tureef abbaa koos mana hidhaatii naa baase jedheen hirira deegarsaa sana irra dhaqnee ture jedhee jedhan Obbo Wandimuun.
Haa tahu malee guyyaa sana boombiin dhohe waan isa madeessef mana yaalaa galee osoo yaalamaa jiruu guyyaa sadiin booda situ kana godhe jedhanii na qaban jechuun naaf ibsera jedhan abokaatichi.
Geetuu, Biraanuu fi Xilahun poolisiin nu qorataa ture ammas wal arganne nama irratti ragaa nuuf baha bilisa isin baasna nuun jechaa akka turan natti himaa turan jedhu ogeessi seeraa kun.
Nuyi yommuu didnu nama biraa irra hin keenyu isinumatti deebisna nuun jedhan jechuun akka isaanitti himan dabaluun himaniiru.
Himaticha irratti yaada Abokaatichaa
Himaticha keessa Dr Abiy uummata Oromoo biratti hin jaalatamu jechuun yakkicha qindeeessan kan jedhu erga ibsanii Obbo Wandimmuun ''Dr Abiy Oromoo biratti damma damma caalu,damma daamuuti,'' jedhan.
Namoota siyaasaan biyyaa bahanii waggoota dheeraa biyya ormaa turan nama biyyatti deebise waan taheef hedduu jaalatamu jedhan.
Kanaaf ammaaf yoo ibsuu baannus himatichi sirrii miti jedhan. Poolisoonni amma namoota himataman qorataa jiranis isaanuma waggoota lama sadii dura shororkeessumman isaan qorataa turan akka tahe himani, waanti adda taasisu Dr Abiy irratti tahuu isa qofa jedhan.
Yeroo sanas Obbo Wandimmuun abokaatoo isaanii tahuun isaan tajaajilaa turaniiru.
Beellama dhufu irrattis yaada koo barreefamaan nan dhiyyeessaa jedhan Obbo Wandimuu Ibsaa.